Kufuridzira Kusvikira Pakusangana neBrand Advocacy | Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 13, 2013 Chitatu, Kurume 8, 2017 Douglas Karr
Jay Baer ndiye mumwe wevanotungamira ekushambadzira maspika maspika uye vanyori vandinoteerera. Iye achangobva kunyora inonakidza blog post uye infographic iyo inopa kuenzanisa kukuru kwevanokurudzira vachipesana nevatsigiri vemaki.
Kufuridzira kusvitsa chinhu chakakosha chevakawanda vezvenhau uye zvirongwa zvemazuva ano zvehukama neruzhinji. Asi ivo vanowanzo ratidza kusaita pakufambisa hunhu kupfuura yekutaura kwevanhu. Ini ndakanyora posvo nezve nei izvi zvakadaro, zvinodaidzwa Nei Online Influencer Outreach iri Yakawedzeredzwa uye Maitiro Ekugadzirisa Iyo. Nyaya hombe ndeyekuti isu tinowanzo kuvhiringidza vateereri nepesvedzero. Kuve nevazhinji vateveri veTwitter hakukupe iwe simba rekutyaira chiito, inokupa iwe simba rekutyaira kuziva.
Zvinyorwa "zvinopesana" zvinozivikanwa asi hachisi chokwadi. Neraki, vatengesi havafanirwe kuita sarudzo pakati pekudyara mari mune rimwe zano kana rimwe racho. Iyi ndiyo imwe yemaitiro aya. Kutanga, humbowo huri mukudzoka kwekudyara. Iwe unogona kuona kuti chinokanganisa chirongwa chekusvitsa inzira inokwanisika yekutyaira kutarisa kune yako brand uye inotevera shanduko. Kana iwe uri chigadzirwa chitsva kana sevhisi, unogona kunge usina vanotsigira zvakakwana uye iwe unofanirwa kuwedzera vateereri vanokurudzira. Chechipiri, pane hunhu hwakasimba hwemombe pawebhu. Kufuridzira kunogona kutungamira mukureverera, haifanire kunge iri imwe kana imwe.
Ini ndinokurudzira munhu wese kuti averenge iyo posvo uye ongorora iyo infographic. Zvirongwa zvekumirira Brand zvinogona kutyaira zvakanak mhedzisiro… tarisa chii Zuberance anogona kukuitira!
Tags: tsigiratsigira kusvikablogger inosvikabrand brand kukurudzirabrand vatsigiriKugutsikana uye Shandurakuchinjakushambadzira kushambadzirainfluencer kusvika kunzeinfluencers vs brand vatsigiriJay baerne
Infographics uye Vhidhiyo: Online Kutsvaga Maitiro Ekuongorora